इस्राएलका जैतून को माउन्ट - वस्तु जसको महत्व संसारमा संस्कृति लागि धेरै गाह्रो overestimate गर्न। इतिहास र वास्तुकला को यस स्मारक पनि धेरै धर्म को प्रतिनिधिको लागि पवित्र स्थान हो।
जैतून को माउन्ट (इजरायल) र यसको भूगोल
orography मामलामा यरूशलेमको उत्तर-पूर्वी, पूर्वी र दक्षिण-पूर्वी किनारा साथ फैलयो डाँडामा, पहाड को एक रिज, छैन। यो तीन अलग चुचुराहरूको, उच्चतम जो 826 मीटर मा ऊंचाई पुग्छ हुन्छन्।
एक रिज सीमा माउन्ट शोक (वा मृत्यु) संग दक्षिण पक्षमा। जैतून को माउन्ट शहर देखि Kidron उपत्यका विभाजित। पश्चिमी ढलान मा तल, यो गेतसमनीको भनिने ठाउँ छ। यो पदहरू अनुसार, Iisus Hristos आफ्नो गिरफ्तारी अघि प्रार्थना, यहाँ थियो।
पुरातन समयका देखि यी पहाडहरू भद्राक्षका संग लगाए थिए, र यसैले पहाड यसको नाम पायो र दोस्रो - जैतून। सबैभन्दा पुरानो भद्राक्षका आठ आज पनि गेतसमनीको बगैंचामा भित्र बढ्न।
पवित्र महत्त्व हिमालहरू
जैतून को माउन्ट यहूदीहरूले र विभिन्न रीतिथितिहरू ख्रीष्टियनहरूले रूपमा सम्मान गरिएको छ। यहूदी, यो दाऊदले परमेश्वरको उपासना ठाउँमा छ। यो जैतुन डाँडामा संसारको आपत्तिजनक अन्त र यहूदी संग जडान अगमवक्ता इजकिएल।
ख्रीष्टियन मा, जैतुन डाँडामा आफ्नो गिरफ्तारी अघि ख्रीष्टको अन्तिम प्रार्थना ठाउँ छ। यहाँ उहाँले स्वर्गमा।
पवित्र पदहरू र उल्लेख गेतसमनीको बगैंचामा। विशेष, सुसमाचारको येशू अक्सर यसरी प्रार्थना गर्न आफ्ना चेलाहरूलाई गए जहाँ यो छ कि भन्छन्। यहूदा - यहाँ उहाँले तिनीहरूलाई एक द्वारा धोका थियो।
जैतून को माउन्ट (यरूशलेम): मेजर आकर्षण
को ढलान र वास्तुकला स्मारक, पवित्र साइटहरू र आकर्षण तीन विशाल संख्या को रिज भन्दा माथि छ। तिनीहरूमध्ये:
पुरानो यहूदी चिहान;
को भर्जिन मरियम को चिहान;
भविष्यवक्ताहरूलाई को गुफा;
सबै जातिका मन्दिर;
हाम्रो पिताको क्याथोलिक चर्च;
Marii Magdaliny को चर्च;
गेतसमनीको बगैचा, र अन्य।
पुरातन यहूदी चिहान
तपाईं यरूशलेममा जैतुन डाँडामा हेर्न भने, यो तुरुन्तै शाब्दिक यसको पश्चिमी ढलान संग डटेड छन् tombs को एक विशाल संख्या मारे। यो सबै पुरातन यहूदी चिहान को चिहान छ। यहाँ उनीहरू त्यहाँ 150 भन्दा कम हजार छैनन्, छन्!
यसलाई अगमवक्ता जकरियाको पुस्तक अनुसार, यहाँ थियो, मरेका पुनर्जीवित हाम्रो संसारको दिन को अन्त मा सुरु हुनेछ। डाँडाको यो दफन niches जसमा 36 तथाकथित अगमवक्ताहरू गुफा disposed छ। अनि अगमवक्ता जकरिया को चिहान - तिनीहरूमध्ये।
जैतून विद्वान को डाँडाको पहिलो दफन अझै IX-एक्स शताब्दीयौंदेखि तिथि ई.पू.। अहिले यो बिन्दुमा म Silwan को अरब आवासीय छिमेकी फैलयो। पछि, चिहान विस्तार र रिज को ढलान लिन थाले। मध्य-बीसौँ शताब्दीमा, जैतुन डाँडामा जोर्डन गर्न belonged गर्दा धेरै चिहानहरू र Tombstones, नाश थिए बर्बाद वा desecrated।
को भर्जिन मरियम को चिहान
को Theotokos (भर्जिन मरियम) को चिहान - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मसीही अवशेषहरूको एक। यो गेतसमनीको बगैंचामा मा स्थित छ, यो भर्जिन को धारणा को गुफा चर्च भन्दा बनाइएको थियो। यो मन्दिरमा उपासना पहुँच धेरै faiths प्रतिनिधिको छन्।
यो प्रेरितहरूको को पवित्र पदहरू अनुसार भर्जिन मरियम, एक सेन्ट मसीही चर्चको erected गाडे, यहाँ थियो।
मन्दिर जमीन मुनि छ। यसलाई मा जा, को तिर्थयात्री 48 कदम को निर्वाचकगण को व्यापक सिँढीको बाटो प्रवेश गर्छ। सानो मण्डप स्थित भर्जिन मरियम को लाश राख्ने बाकस -2मीटर द्वारा2नाप्ने एउटा कोठा। भूमिगत चर्च को कुल लम्बाइ 34 मिटर छ, चौडाई - बस6तुरुन्त क्योटो गुलाबीमार्बल मा मण्डप पछि, अत्यधिक भएको अर्थोडक्स द्वारा revered छ जो परमेश्वरको आमा, को चमत्कारी प्रतिमा राखिएको।
पनि भर्जिन मरियम श्रद्धा गर्ने भर्जिन मरियम र मुस्लिम को धारणा को भूमिगत चर्च जानुहोस्।
सबै राष्ट्र को चर्च
प्रभुको पिडा, वा को basilica सबै राष्ट्र को चर्च - यो शायद जैतुन डाँडामा मा सबै भन्दा प्रसिद्ध मन्दिर छ। मन्दिरमा येशू छाडा आफ्नो अन्तिम प्रार्थना प्रदर्शन जहाँ गेतसमनीको बगैंचामा, को साइटमा 1920 मा बनाइएको थियो।
को Basilica को लेखक इटालियन architect एण्टोनियो Barluzzi थियो। मन्दिरमा संसारको बाह्र देशका दानको मा बनाइएको थियो। यो 12 domes संग सजाया छ किन कि छ।
सबै राष्ट्र को चर्च एक क्याथोलिक छ, तर अन्य धर्म को प्रतिनिधिहरु चर्च वेदी नजिकै खुला आफ्नो सेवाहरू बनाउन सक्छ।
Marii Magdaliny को चर्च
जैतुन डाँडामा को ढलान adorns अर्को सुन्दर मन्दिर - सेन्ट मरियम मग्दलिनी एक रूसी अर्थोडक्स चर्च। यो लेट XIX शताब्दीमा बनाइएको थियो। यो यस्तो चमत्कारी प्रतिमा "Hodegetria" को रूपमा धेरै अवशेषहरूको, साथै Bolsheviks को हात बाट 1918 मा एक शहीद मृत्यु मृत्यु जो रानी एलिजाबेथ Fyodorovna र नन Varvara, को अवशेषहरूको घरों।
मन्दिर, सेतो-खैरो स्थानीय पत्थर को निर्माण, एक उत्कृष्ट उदाहरण रूसी वास्तुकला छ। निर्माण सात साना domes र टावर छ। पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू को चर्च को भित्री सुन्दर तल्ला रंग संगमरमर बनेको, साथै iconostasis, चरेस बनेको गहने संग सजाया मारे।
यसरी, जैतून (जैतून) पहाड यरूशलेममा - आकर्षण धेरै संग एक पवित्र क्षेत्र। हरेक साँचो विश्वासीले को प्राचीन मन्दिर सपनाको पवित्र अवशेषहरूको स्पर्श, उनको भ्रमण गर्नुहोस्।
Waterpark "ओलम्पिक" (कलिनिन्ग्राद): तस्बिर संग आकर्षण को विवरण। पानी मनोरञ्जन केन्द्र आज गर्छ?
ताल जेनेभा: आकर्षण
पत्रुस र पावलको मस्को मस्को (यासिनेभो)
किन बाढी को सपना? यो सावधानी
मशरूम संग च्याउ सस
एक टाटु कसरी बनाउने?
रूस मा सबै भन्दा रोचक शहर, प्रत्येक भ्रमण गर्न